Madaxweyne Cumar Al Bashiir oo xaalad deg deg ah kusoo rogay dalkiisa | Salaan Media
Madaxweynaha Dalka Sudan Cumar Xasan Al Bashiir ayaa xaalad deg deg ah kusoo rogay dalka Sudan, kadib banaan baxyo rabshado watay oo looga soo horjeeday maamulkiisa oo dalkaasi qeybo kamid ah ka socday.
Al Bashiir ayaa shaaca ka qaaday in uu dalka kusoo rogay xaalad deg deg ah mudo sanad ah, waxa uuna Madaxweynaha kala diray Xukuumadda iyo Maamulada Gobolada dalka Sudan.
Khudbad uu shacabka Sudan u jeediyay Madaxweyne Al Bashiir ayuu ku sheegay in uu si weyn ula socdo xaalada murugsan ee dalkiisa ka jirta iyo sidoo kale uu qiimeeyay banaan baxyada la dhigayay.
Madaxweynaha dalka Sudan ayaa sidoo kale Baarlamaanka dalkaasi ku wargaliyay in ay dib u dhigaan wax ka bedelka ay ku sameenayaan Dastuurka dalkaasi , wax ka bedelka dastuurka ayaana Madaxweynaha u ogolaanaya in uu mar kale tartamo.
Dalka Sudan qeybo kamid ah waxaa bilihii lasoo dhaafay ka socday banaan bax xoogan oo markii hore ka dhashay sicir barar, banaan baxyada ayaana markii dambe isku badelay kuwa dowlada looga soo horjeedo ayna ku dhintaan dad badan oo shacab ah.